अचम्मैको कुरोः बुद्धको मुत्तीबाट निस्कियो मान्छेको शरिर, यस्तो तथ्थ बाहिरियो ! - Sabal Post
एजेन्सी – अहिलेको प्रविधिको युग यति तीब्र गतिमा अघि बढिरहेको छ, जसले नयाँ नयाँ खोज अनुसन्धानलाई सहज बनाउँदैछ । विकसित प्रविधिले वैज्ञानिकहरु नयाँ नयाँ कुरा पत्ता लगाउन लागिरहन्छन् । विकसित प्रविधिको प्रयोग गरेर वैज्ञानिकहरुले करिब एक हजार वर्ष पुरानो बुद्धको मुर्तिबाट मान्छेको शरीर निकालेका छन् । नेदरल्यान्ड्सको एक सङ्ग्राहलयमा रहेको एउटा बुद्धको मुर्तिमाथि अनुसन्धानमा जुटेका वैज्ञानिकहरुले सुन्दै डर लाग्दो तथ्य बाहिर ल्याएका हुन् । यो समाचार सुनेर तपाईँ पनि पक्कै चकित पर्नुहुन्छ । हजारौँ सालदेखि संग्राहलयमा थन्किएको बुद्धको एक मुर्तिलाई त्यसका मालिकले मर्मतका लागि झिकेर सफाई गर्दा यस्तो भेटिएको हो ।
सं‌ग्राहलयका मालिकले पुराना मूर्तिको मर्मत गर्नका लागि मेन्डर मेडिकल सेन्टर (डच) मा पठाएका थिए । तर कसैलाई पनि थाहा थिएन, त्यो मुर्तिभित्र रहेको भयानक तथ्यबारे । जब मूर्तिलाई उठाएर स्क्यानर मेशीनमा हालियो तब मुर्तिभित्र प्राचीन कागज देखियो । जसलाई मोडेर मुर्तिभित्र हालिएको थियो । तर ती कागज निकालेपछि पनि मुर्तिभित्रबाट अरु नै केही निस्कियो ।
समाचार अनुसार मुर्तिभित्र एकजना मानिसको सिङ्गो शरीर थियो । तपाईँलाई लाग्न सक्छ, को होलान् ती मानिस ? एक हजार वर्ष पुरानो बुद्धको मूर्तिलाई जब पगालियो तब त्यहाँबाट मानिसको सिङ्गो शरीर निस्किएको हो । उनी को थिए त तपाईँले सुन्नु भयो भने चकित पर्नुहुन्छ । ती मानिस थिए, ‘ल्यूक्यान्स’, जसलाई बुद्धका ‘मास्टर’ मानिन्छ । यो खोजीलाई वैज्ञानिकका लागि ठुलो उपलब्धि मानिए पनि तर यस खोजले हृदय हल्लाउने तथ्य बाहिर ल्याइदिएको छ ।
अस्ताए : प्रदेश ५ का काँग्रेस संसदीय…
पाँचथर हत्याकाण्डः साच्ची मृतक फियाक परिवारकै ज्वाइँले…
कृष्णनगरमा युवा द्धारा बृहत रुपमा सरसफाई
मुख्यमन्त्री पोखरेललाई राजपा सांसदको प्रश्न : बर्दियाका…